Tababar ku saabsan Habka maamulka Mashaariicda oo lagu soo gabo-gabeeyay Hargeysa | Somaliland.Org
January 31, 2012	a href=”http://www.somaliland.org/images/b/2012/01/041.jpg”>Hargeysa (Somaliland.Org)- Agaasimaha Machadka Tababarka shaqaalaha dawlada Maxamed Mixile Boqore ayaa maanta Huteelka Hadhwanaag ee Magaalada Hargeysa ku soo gabo-gabeeyay tababar ku saabsan habka maamulka xisaabaadka iyo maal-gelinta mashaariicda.
Tababarkan oo socday muddo sadex maalmood, waxa ka qeyb galay 25 xubnood oo ka kala socday Wasaarada daakhiliga, Maamulka Gobolka, maamulka degmada Hargeysa, Xildhibaano ka tirsan Golaha deegaanka iyo Agaasimeyaasha waaxaha ee dawlada Hoose ee Hargeysa.
Xoghaya Fulinta Dawlada Hoose ee Hargeysa Mawliid Waris Cabdilaahi oo ku hadlayay afka ka qeyb galeyaasha tababarka ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin tabarkan waxaanu tilmaamay inay macluumaadkii ay ka heleen ku dabiqi doonaan shaqo maalmoodkooda.
Xoghayuhu wuxuu sheegay in tababarkani ka taageerayo maamulka dawlada Hoose sidii ay uga faa’iidaysan lahaayeen Mashaariicda JPLG-ga ee ay dawladaha Hoose ka taageeraan shan ka mid ah Ha’yadaha qaramada midoobay.
Mawliid Waris waxa uu sheegay inay ku faraxsan yihiin qiimayn lagu sameeyay tababarkan oo lagu ogaaday in maamulka dawlada Hoose ee Hargeysa yahay ta ugu nidaam wanaagsan marka loo eego dawlada hoose ee dalka.
Agaasimaha mac-hadka tababarka shaqaalaha dawlada Maxamed Mixile Boqore oo ka hadlay xidhitaankii xafladaasi ayaa ku ammaanay 25kii masuul ee ka qeyb galay tababarkan oo uu ku sifeeyay inay si hagar la’aan ah uga qeyb qaateen mudadii aqoon korodhsiga ay ku gudo jireen.
Mr. Mixile waxa uu sheegay inay tababaro noocan oo kale ah ku soo qabteen magaalooyinka Burco, Berbera iyo Boorame, waxaanu tilmaamay inay isla maanta tababarkan lagu soo gabo-gabo-gabeeyay Hargeysa iyo Gabiley.
Agaasimuhu wuxuu intaasi ku daray in tababarkani qeyb ka yahay mashaariic ay ka wada shaqeeyaan qaramada midoobay iyo dawladaha hoose ee dalka.
Maxamed Mixile waxa uu ammaanay dawlada Hoose ee Hargeysa oo uu sheegay inay tahay ta ugu nidaamka wanaagsan dawladaha hoose ee dalka.
Agaasimuhu waxa uu sheegay in machadkoodu ay Ha’yadaha qaramada midoobay ee maal-geliyay mashaariicda JPLG ay u soo jeediyeen in sadex laab loo kordhiyo dhaqaalaha si wax looga qabto adeegyada bulshada ee shanta degmo ee caasimadda. Weriye Cumar Maxamed Faarax
Previous PostDawlada Denmark Oo ku dhawaaqday Xafiis farsamo oo ay ka furanayaan SomalilandNext PostDeeq Lacageed Oo Loo Fidiyay Askar Ka Dhaawacmay Ciidanka Qaranka	Blog